Iindaba -Yongkang Hardware Fair
Nge-20 ka-Okthobha, oomatshini be-Yongkang kunye ne-Hardware Expo yabanjelwa e-Yongkang International Convention kunye neZiko leMiboniso. Umboniso ubonise ikakhulu izixhobo zekhompyutha kunye noomatshini. Ngalo mboniso, inkampani yethu ibonise iimveliso zethu kubathengi, kwaye kunxibelelwano lwesiza, siqokelele ulwazi lwabathengi abanokubakho kwaye siyiqonda ngakumbi imeko yemarike yamvanje yemakethi yoomatshini. Abathengi kunye nababonisi bebukele iintsuku ezininzi ezilandelelanayo. Indlwana yenkampani igcwele ngabantu. Itekhnoloji yokusika kunye nesiphumo esimangalisayo kubangele iziphumo ezilungileyo. Ndinqwenela ukuba ibe lixesha elitsha kumzi mveliso wehardware!
Ngokusekwa kunye nokuphuculwa koqoqosho lwentengiso lwangoku, emva kweminyaka engaphezu kweshumi yokuqokelelwa kunye nophuhliso, isikali sehardware iye yaba yindawo entsha eqaqambileyo kwishishini lezemizi-mveliso, kwaye sade saba lishishini leentsika zezixeko ezithile kunye nokukhula koqoqosho olutsha. Isalathiso sokuqhuba uphuhliso loqoqosho lwengingqi.
Iziphumo zethu zemiboniso kulo nyaka zihle kakhulu. Ngokunxibelelana ngesigulana phakathi kwabasebenzi abanomdla kunye nababonisi, iimpawu kunye nezibonelelo zemiboniso ziboniswa ngokungacacanga nangokucacileyo phantsi kweentetho ezimangalisayo kunye nemiboniso yabasebenzi. Emva kokuba abaphulaphuli kunye namashishini athatha inxaxheba enokuqonda okuthile kweemveliso, bonke babonisa injongo yokusebenzisana. Ngalo mboniso, sandisa iihorizons zethu, kwaye singayenza nakwixesha elizayo Ukusebenzela abathengi ngcono. Kwangelo xesha, umthengi unokuqonda okunzulu ngokusetyenziswa kwemveliso yenkampani kunye nobubanzi besicelo,. Xa kuthelekiswa nezando zemveli kunye nesando esijikelezayo kwimarike, izando ezenziwe yinkampani yethu zahlukile ngenkangeleko kwaye ziqwalaselwe kakhulu. asiqinisekisi kuphela ngemveliso, kodwa sisebenza ngokufanelekileyo. Ukongeza, kule Expo, sikwanika umda omkhulu wenzuzo kubathengi, ngethemba lokufumana ukukhula okuqhelekileyo kunye neearhente kunye nabathengisi. Abathengi abaninzi batyikitye ikhontrakthi ngokukhawuleza emva kokwazi inkampani kunye nolwazi olunxulumene nemveliso ngokweenkcukacha. Ukuza kuthi ga ngoku, baninzi abathengi beenjongo ababhalisiweyo. Kulo mboniso, inkampani yethu inethamsanqa lodliwanondlebe nesikhululo seYongkang TV, esonyuse ukuthandwa kweemveliso zethu.
Siza kubonelela ngenkonzo efanelekileyo nangobuchule kwimveliso. Sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba phantsi kobunkokheli benkampani, ngemizamo engagungqiyo yabasebenzi baseJiahao, ngokuqinisekileyo siya kufezekisa iindawo eziphakamileyo kwaye siqhubeke nokuqaqamba.